Rue | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fototeny mahasoa: ny fampiasana ny fananana ara-panafody amin'ny fitsaboana nentim-paharazana
Herb Ruta mamony be dia be no ampiasaina - toy ny fanafody, ary toy ny poizina, ary toy ny kulinary faniry. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mianatra ny zava-drehetra momba ny fotony sy ireo mari-pamantarana azony ampiasaina. Hanambara anao ihany koa momba ny endriky ny fanangonana an'io zavamaniry io sy ny fanoherana azy. Ruta: ny famaritana ny toeram-pitsaboana Ny herin'ny fiara sy ny fanasitranany dia efa zatra amin'ny ankamaroan'ny olona, ​​ary koa ny sarin'ity zavamaniry maharitra ity.
Fambolena ny rue: fambolena sy fiahiana ao an-jaridaina
Sarotra ny mieritreritra fa misy olona tsy mahafantatra momba ny zavamaniry toy ny fototeny. Ny tantarany dia niverina nandritra ny arivo taona, ary nandritra ny fotoana rehetra, dia nampiasaina betsaka tamin'ny fitsaboana nentim-paharazana sy tamin'ny fiainana andavanandro izany. Ankehitriny io voninkazo io dia ampiasaina amin'ny fomba mahandro, ny pharmaceutique, ary koa ny antidotes sasany voaomana amin'izany. Manana toerana mendri-piderana izy ao anatin'io fanafody io.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Rue